दश करोड ६३ लाख राजश्व संकलन
मोरङ – जिल्ला वन कार्यालय मोरङले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १० करोड ६३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।
गत आवमा कार्यालयले वन पैदावार (सरकारी र साझेदारी)बाट नौ करोड ३४ लाख २२ हजार रुपैयाँ, दाउरा बिक्रीबाट १६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ, जडीबुटीबाट एक लाख ९१ हजार रुपैयाँ, सामुदायिक वनबाट ६४ लाख ६ हजार रुपैयाँ, न्यायिक दस्तुुरबाट १० लाख ३३ हजार रुपैयाँ, बेरुजुु असुुलीबाट २८ लाख २ सय २५ हजार रुपैयाँ र प्रशासनिक सेवाबाट सात लाख ९५ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको जिल्ला वन अधिकृत डा. विनोद देवकोटाले जानकारी दिए ।
आव २०७३/७४ मा कार्यालयले सात करोड ५० लाख राजश्व संकलन गरेको थियो । सामुुदायिक वनबाट तीन लाख ३४ हजार, साझेदारी वनबाट एक लाख ९३ हजार, सरकारी वनबाट ४४ हजार ९ सय ९० तथा निजी वनबाट दुई लाख ११ हजार क्युुफिट काठ उत्पादन भएकोे छ । वनबाट उत्पादित काठ उपभोक्तालाई यसवर्ष पनि वन पैदावार आपूर्ति समितिमार्फत वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ । वन पैदावार आपूर्ति समितिले ५ सय ५० उपभोक्तालाई गत वर्ष ३४ हजार क्युुफिट काठ वितरण गरेको थियो ।
सहज रूपमा उपभोक्तालाई घर बनाउनेदेखि विकास निर्माण तथा कृषि औजार निर्माणका लागि काठ उपलब्ध गराउँदै आएको डा. देवकोटाले बताए । कार्यालयले आगलागी पीडितलाई ४ सय ३४ क्युुफिट तथा विकास निर्माण र कृषि औजारका लागि ६ हजार ६ सय ४५ क्युुफिट काठ वितरण गरेको छ घने ८५ चट्टा दाउरासमेत उपभोक्तालाई वितरण गरेको छ ।
सेतुवन्ध भन्सार कार्यालयबाट लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व संकलन
राजश्वबापत पाँच अर्ब २१ करोड रूपैयाँ संकलन